MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA POMCHI IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Pomchi iyo Sawiro
Pomeranian / Chihuahua ey isku dhafan oo isku dhafan
Pomchis, Rei oo 1 jir ah iyo Twinkie oo 5 jir ah— 'Rei (bidix bidix), iyo awoowgeed Twinkie. Twinkie waa jiilkii ugu horeeyay ee Pomchi oo ka yimid biyo xireenka dheer ee Chihuahua iyo aabe reer Pomeranian ah, laakiin wuxuu umuuqdaa inuu yahay Pom saafi ah. Isagu waa mid aad u sarreeya oo wuxuu u dhaqmaa sida arday. Isagu waa nin jilicsan laakiin isagu waa saaxiibtinimo oo wuxuu jecel yahay inuu noqdo bartamaha dareenka. Rei waa jiil saddexaad oo Pomchi ah oo ka socda aabbeheed. Waxay ka timid jiil labaad 50/50 Pomchi aabe iyo 3/4 Chihuahua iyo 1/4 hooyo Pomeranian ah. '
3 todobaadkii jir muqisho feeryahanka
Pomchi ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Pomeranian iyo Chihuahua . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Heerka Pomchi - wuxuu ku ansaxiyay 6/18/1998 Naadiga Pomchi ee Aragtida Guud ee Mareykanka: Pomchi waa eey qurux badan, oo gaaban oo isku xiran oo leh hadal macaan, feejignaan iyo aragti caqli badan. Miisaanka: 5 illaa 12 rodol. Saamiga: Jidhku wuu gaaban yahay oo dumarka ayaa loo oggol yahay inay xoogaa ka dheeraadaan ragga. Madaxu waa meeris wareegsan. Muuqaal: Digniin, caqli badan Indhaha: Wareegsan, oo aan soo bixin, mid aad u ballaadhan ama aan aad isugu dhowaan. Midab madow oo ku wareegsan indhaha marka laga reebo is-midabaynta oo loo oggol yahay eeyaha buniga, buluugga ah ama midabka khafiifka ah leh. Indhuhu waa madow yihiin marka laga reebo midabaynta khafiifka ah ee loo oggol yahay dheecaanka. Dhegaha: Cabbirka dhexdhexaadka ah, dhegaha nooca kacsan, oo toos u taagan marka la feejignaado laakiin laga yaabo in la qaado ayaa dib ugu soo laabtay meel lagu nasto. Qaamuus: Dhex-dhexaad gaaban, wax yar tilmaamaya, joogsi qeexan. Dhabannada iyo daamanka ayaa ku tiirsan. Sanka: Midabaynta madow marka laga reebo is-midabaynta oo loo ogol yahay buluug ama bunni, midabaynta hilibka oo loo ogol yahay cadaan iyo kareemooyin fudud. Qaniinyo: Heer ama maqas. Qoorta: Saldhiga gadaal u dhig garbaha, oo aan aad uga gaabnayn inuu noqdo mid qurux badan. Khadka sare: Heerka. Jidhka: Si fiican u feera, wareeg, weligood foosto. Tail: Dhex-dhexaad dherer ah, oo fidsan ama wareeg ah oo gadaasha ah, oo caaraddu ay taabato dhabarka oo keliya, oo aan weligood dhejin lugaha dhexdooda. Garbaha: u foorarsada xagga dhabarka oo leh dib u dhigis ku filan oo qoorta si sax ah loogu qaado, marna hoos u dhig ama hooseeya. Baarayaasha hore: toosan iyo isbarbar socda. Pasterns: Pomchi wuxuu si fiican ugu istaagayaa suulasha, weligiis kuma dhicin casharkii hore. Dhaawacyada hore ee jirka waa laga saari karaa. Cagaha: Lug yar oo jilicsan. Xarunta dhexe: Musqulo, oo leh koolkoollo dhinac u siman dhulka, si fiican u kala fog, si fiican u sii deynaya, adag oo adag. Cagaha waa sidii hore. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Coat: Waxay noqon kartaa laba jibbaar ama hal dahaadh. Dharka kore waa inuu ahaadaa mid buuxa, oo jilicsan jilicsan oo dhalaalaya oo leh ilaaliyeyaal dhaadheer oo dhaadheer. Koodh si fiican loogu dhejiyay jirka oo leh qoorta qoorta oo la doorbido, iyo iskaanka madaxa iyo dhegaha. Timaha ku darsada cufnaanta iyo dhogorta. Koodhadhka la oggol yahay Baarashka oo loo ogol yahay lugaha iyo dhegaha. Wax goynta: waxaa loo ogol yahay cagaha iyo futada habeyn ahaan kaliya. Midab: Midab kasta oo ay ku jiraan adag, parti, merle, sable waa isku mid la aqbali karo. Socodka: Dhaqdhaqaaqa codka, siman oo bilaash ah. Jadwalka ugu sarreeya waa inuu ahaadaa mid adag oo heerka dambe ee eeyga socda.
PCA = Naadiga Pomchi ee Mareykanka
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Chiranian
Diiwaangeliyaha Taranka Nakhshadeeyaha = Chiranian
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Chiranian
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Pomchi
Sonkorta Pomchi markay tahay 4 bilood
'Mowgli waa afar jir Pomchi yar oo culeyskiisu yahay kaliya afar rodol. Waa ilmo aad u caqli badan oo khariban. Wuxuu u tababaray milkiilihiisa inuu xoqo caloosha markuu isku rogo dhabarkiisa. Isagu waa qurux badan yahay buskudka eyga. Waxa uu leeyahay walaalo ka weyn iyo walaalkeed (a Dahab dahab ah iyo a Jackshund ) wuuna sii wadi doonaa oo ilaalin doonaa buskud eyga ah saacado ka hor inta aanu go'aansan inuu cuno. Wuu ku faraxsan yahay inuu daawado markuu la macaamilayo eeyahayaga kale. Wuxuu ku ciyaaraa 15 rodolkeena Jackshund wax badan oo wuu daawan doonaa oo ciyi doonaa inta Jackshund iyo Golden Retriever ay ciyaarayaan. Had iyo jeer wuu kacsanaadaa markaan ka helo xariggiisa maxaa yeelay wuu ogyahay inaan meel u soconno. Safarka had iyo jeer waxaa ku jira daaweyn sida digaag digaag ah. Waa eey aad u macaan oo jacel oo had iyo jeer ku faraxsan inuu arko milkiilayaashiisa markasta oo aan shaqada ka nimaadno. Mise xitaa isaga ayaa ka maqnaa daqiiqado yar. ''
Cameo the Pomchi markii uu jiray 18 bilood— 'La kulan Cameo, Pomchi-kayga (Pomeranian / Chihuahua mix). Waxay ku jirtaa 1 1/2 sano jir sawirkan, iyadoo hurdada ka soo kaceysa oo wali u muuqata mid hurdo yar. Cameo waa eey farxad badan, saaxiibtinimo yar leh weji dawaco u eg oo badanaa ka dhigta iyada mid u eg dhoola cadeyn. Waxaan u maleynayaa inay tahay! Waxay leedahay shakhsiyad majaajilo ah oo had iyo jeer iiga tagta iyadoo dhoola cadeynaya wejigeyga. Camee wuxuu jecel yahay alaabteeda cufan ee xiisaha badan sidoo kale wuxuu ku raaxeeyaa la ciyaarista eeyga walaalkeed Jug dhalada . Iyadu waa gacaliso iyo xubin qaali ku ah qoyskeenna. '
'Waa kan sawirka eeygayga Munchkin. Isagu waa isku darka Chi-Pom. Aabihiis wuxuu ahaa Chihuahua oo timo dheer leh, hooyadiisna waxay ahayd Pomeranian. Wuxuu culeyskiisu yahay 15 rodol, oo aan caadi ahayn, laakiin wuxuu leeyahay astaamaha 2-da nooc. Aad buu u yahay madax adag oo madax bannaan. '
Mocha the Pomchi eey yar oo jirta 8 toddobaad — hooyadeed waa a Pomeranian aabaheedna waa a Chihuahua .
Taco at 2 sano
Timbit the Pomchi markii uu 7 bilood jiray isagoo kubad afka ku jira
Kani waa Micki labadiisa waalidba waa iskudhafka Pom / Chi. Wuxuu ahaa runtada qashinka, oo culeyskiisu yahay 1/3 ee rodol miisaanka dhakhtarka at 5 toddobaad. Marka uu gaaro 2 sano culeyskiisu waa 6.1 rodol. Ma ciyo ama ma ciyiyo (wuu khuuriyaa markuu faraxsan yahay) waana eeyga ugu macaan, ugu jacayl badan ee aan abid ogaado!
'Timbit waa iskutallaabta Pomeranian / Chihuahua. Waxaan ka qaadanay Timbit xarunta badbaadinta Petland markii uu jiray 6 bilood. Milkiilayaashiisii ​​hore way kala tageen oo midkoodna ma uusan dooneyn mas'uuliyadda korinta eey sidaa darteed wiilkii yaraa dib ayey ula noqdeen. Markii aan aragnay Timbit waxay ahayd jacayl aragtida koowaad. Hadda wuxuu jiraa 1 sano, 10 bilood (dhalashadiisu waa 16-ka Ogast) culeyskiisuna waa 8 rodol.
'Timbit waa arday aad u dhakhso badan — wuxuu guriga ku qornaa ugu yaraan hal usbuuc (in kasta oo uu markii horeba ahaa 6 bilood markii aan qaadanay). Wuxuu si dhaqso leh u barto tabaha wuxuuna jecel yahay ciyaarta iyo sidoo kale tababarkiisa edbinta. Waan hubaa inuu tixgelin doono xawaarehiisa inuu yahay hantidiisa ugu fiican. Waa laga yaabaa inuu yar yahay laakiin wuxuu dhowr jeer ka badiyay Adhijirka Jarmalka. Waxaan badanaa u qaadnaa Timbit a soco hal mar maalin kasta oo kale iyo socod wanaagsan oo ardaaga maalin kasta. Wuxuu jecel yahay socodka laakiin runtii wuxuu jecel yahay inuu ku ordo xawaare sare.
mastiffka ingiriiska iyo shaybaarka isku dhafan
'Timbit wuxuu ku qayliyaa shisheeyaha iyo eeyaha kale laakiin si dhakhso leh ayuu u degaa markii uu fahmo inaanan ku faraxsanayn dhaqankaas. Gaar ahaan wuxuu si wanaagsan ugula dhaqmaa agagaarka carruurta iyo carruurta yar yar wuxuuna u oggolaadaa inay isaga jeclaadaan oo ay daba ordaan.
'Cesar Millan saameyn weyn ayuu ku yeeshay xiriirka aan la leenahay eeyga. Daawashada Eyga Xiiqsan, iyo akhrinta 'Noqo Hogaamiyaha Xirmooyinka' ayaa runtii na siisay aragti ku saabsan sababta eydu u dhaqmaan sida ay u dhaqmaan iyo sida loo beddelo dhaqanka xun ama aan la rabin. Kahor intaadan daawan Eyga Whisperer iyo akhrinta buugga Cesar ee Timbit wuxuu ahaa eey aad u walwal badan, xukuma. Waxaan adeegsanay xeeladaha Cesar si aan ugu ogeysiino Timbit inuusan isagu aheyn hogaamiyaha xirmada, iyo dabeecadiisa gardarada ah ayaa si aad ah u yaraatay.
Coco Chanel Pomeranian / Chihuahua oo isku dhafan ka dib markii ay haysatay midkeeda iyo iyada keliya qashin eeyo yaryar . '
Eeg tusaalooyin badan oo Pomchi ah
Sawirada Pomchi 1
Sawirada Pomchi 2
Sawirada Pomchi 3
diiwaanka eyga ee america inc
tababarka dheriga eey yar yar
adhijirka Jarmalka iyo chow chow mix
waa imisa qaybta eyga c
sawirka coton de tulear